Ziziphi amaphupha amaapulo, uphupha - ukubona iipulo ephupheni
A ngaziwa Itopiki
Kutheni amaapula aphupha ngamaphupha - ukutolika kwephupha
Ehlabathini kunabantu abambalwa abathandanga ama-apula-izityalo ezinomhlaza, ezinempilo kunye ezihlwaya. Kwaye kuthetha ntoni ukuba esi siqhamo siphupha ephupheni? Ngaba uphawu oluhle okanye uphawu olubi? Yonke into incike kwiinkcukacha ezithile zephupha, kunye nendlela yokutolika.
Ukubona iipulophu ephupheni ngokwemiqulu yephupha likaMiller
Isazi sengqondo uGustav Miller sithi incwadi yakhe ephuphayo yephupha ethi iipulo kwibhethini yephupha ziyimfuneko ebalulekileyo. Ngokukodwa ukuba zinkulu, zibomvu, zihlaziye kwaye zixhomekeke emthini phakathi kwamahlamvu atshabalalayo. Kodwa ukutya isiqhamo esonakalisiweyo, esibi kakhulu ephupheni akusayi kuzisa nto. Ukuba kukho utshintsho olubalulekileyo ebomini bakho, kwaye uloyiko kubo, ngoko ubona iphupha ngeeflethi ezibomvu okanye eziluhlaza luphawu olumkileyo lokushiya ukungathandabuzeki uze phambili. Kodwa qaphela - ukuba ii-apula ezibomvu ziphezu komthi we-apula, kwaye kufuneka ukhuphuke ngamahlamvu-mhlawumbi akufanelekanga. Iipulo zilele emhlabeni zixwayisa ngokumelene nama-flatterers kunye nabahlobo bamanga, bekulungele ithuba lokuqala lokubamba iqela kuwe ngasemva. Ukuba iziqhamo zibola, ngoko uchitha amandla akho.
Kutheni iiapulo ziphupha kwincwadi yephupha yeVanga
Ngokomxholo wephupha lo mprofetikazi omkhulu, iiapulo ezivuthiweyo zibonakalisa ubulumko kunye nokuqonda kwendalo yonke. Ngoko ke, lowo ubethayo kwaye uyidla, uyaqonda ukuba isimo sini. Ukuba ephupheni i-apple ebomvu neyeebomvu yayiyiphupha, ngoko ukuzama kwakho kuya kuthathwa ngumoya uphumelele ngokupheleleyo, kwaye umntu onamava ode kunani, onobulumko, uya kunceda kule nto. I-apula ebolile elele emhlabathini phakathi kwamahlamvu ibonakaliso embi, ukudumala, ukuxoka, ukunyeliswa. Kwakunjalo into efanayo ngomntu ophuphayo ehlwayeni isiqhamo esivuthiweyo ngesandla.
Ukutolika kwamaapulo kwiphupha ngokutsho kwencwadi yephupha likaNostradamus
Ukubona ephupheni lakho i-apula enkulu, entle, evuthiweyo ibonakaliso lokusondela kwempumelelo enkulu okanye ukufumanisa. Ngoko, ngokukhawuleza uza kuhlonishwa ngabantu abaninzi. Kodwa isiqhamo esibolileyo sichaza ukuhluleka kwimeko yangoku. Kukho i-aple ebomvu okanye eluhlaza kwiphupha elithetha ukuba ngokukhawuleza udibana nokudibana kunye nenkosikazi ekhethekileyo. Eli phupha linokubaluleka okukhulu-ukuba kungekudala umfazi uza kusebenza kunoma iliphi ilizwe lehlabathi, apho yonke imifanekiso yezombusazwe izakutshintsha ngokuphawulekayo. Ukuba uphupha ngokukhawuleza uninzi lweeaple ezibomvu ezivuthiweyo phakathi kwamahlamvu amnandi, ukutolika kuku ngale ndlela: izityalo ezimangalisayo ziza kufumaneka ukuba ziphilise kwiindawo ezininzi zezifo.
Ii-aples emthini - intsingiselo yephupha ngokubhekiselele kwincwadi yephupha likaFreud
Njengoko kuyaziwa, i-psychoanalyst Sigmund Freud yajonga ngamaphupha ukusuka kwindawo yokujonga ngesondo. I-apula ebomvu okanye eluhlaza kule ngcaciso - isimboli sesono sangaphambili, kuba emva kokuyidla, abantu baya kuhlaselwa ngokubandezeleka okungapheliyo. Ekuqondeni kweFrud, ukubona i-apula enkulu ebomvu ngumnqweno wokufumana into. Umzekelo, ukuba uyidla isiqhamo, ngoko unomnqweno oyimfihlelo wokulala nomntu othile, kodwa oku akunakwenzeka, kuba into efunwayo ifaneleke ukuthanda uthando ngokwesini. Nangona kunjalo, ukuba unesithambeko esinjalo, ke iphupha liyakubonwa ngendlela enhle. Ukuba uyidla isithelo esibi okanye esomuncu ephupheni, ngoko ngokwenene uyakrokrela ukuxhamla kweqabane lakho kwicala. Kodwa ezi zikhalazo azipheli ngokupheleleyo, ngo-Freud. Kwaye nokuba isiqingatha sakho sinomthandi / mnkosikazi, ngokukhawuleza uza kudanisa kule ndawo, kwaye uya kubuya kuwe. Emva koko, izibophelelo zentsapho zinamandla kuneziqhelo eziqhelekileyo.
Ngokutsho kwephupha eliphakathi kwe-Miss Hasse, ngokusekelwe kwiminyaka yokuqwalasela esoteric, ukucima iipulo kwiphupha - ukuzithokozisa ngokukhawuleza, nokubona indlela odla ngayo-kwiimidlalo ezithandekayo. Kusenokwenzeka nokuba uthando olutsha luya kuphinda luzalwe kwintsapho evuya. Nangona kunjalo, ukuba iziqhamo ephupheni zibonakala zimuncu, ke emva kwakho ngumhlobo oyinyaniso onokuletha ixesha elibi. Ukuba ufumana ama-apula, umzekelo, njengesipho, ke lo ngumqondiso wokufumana iindaba ezilungileyo kwangaphambili. Ngokuqhelekileyo zixhomekeke kwimali - unokunikela ngesithuba esiphezulu okanye ukwandisa umvuzo wakho. Ingaba kwakhona yikottery okanye nayiphina ingeniso engalindelekanga. Kodwa, ukuba uphupha ukuba zibolile okanye zibuhlungu, qaphela ingozi, ngoko uxwayisa incwadi yephupha. Jonga indlela ama-apula anqunywe ngayo - ukwahlukana nabahlobo, kwaye ukusela i-apple juice isichazela isifo.
I-Dream Book yeMeneghetti
Iphupha le-psychologist yaseNtaliyane uAntonio Meneghetti libeka i-apula isiqhamo esiqhelweni somthi wobomi, ngeendlela ezithile kwanompilo ngokwawo. Kwababini nabasetyhini, esi siqhamo ephupheni sithembisa uphumelelo lobomi kunye neentlobo ezinonwabo.
Incwadi yokuphupha ye-Esoteric
Le ncwadi yephupha ithi i-aple eluhlaza, enomuncu okanye engavuthiyo ifanekisela ulutsha lomoya, kodwa i-aple ebolile-yokuba umntu okhulile ngaphakathi. Isiqhamo esithelayo sithetha impilo, iimeko ezintle, ukukhuliswa ngokomoya. Ukuba i-apple yebungu iphupha, ngoko yenza ukuba uqaphele-mhlawumbi naphezu kwempilo enamandla, kukho izifo ezinobungozi ngaphakathi kwakho.
Ukuqokelela iipulo kwiincwadi zokuphupha i-dream-gypsy
Amaapula abomvu afanekisela ubungqina obuqinileyo, vavanywa iminyaka, ngelixa liluhlaza okanye lukhulile - lukhuni kunye nokungapheli kwimicimbi yobungani. Ngokutsho kwencwadi yephupha, kuba umfazi uyisityhilelo sokuba ungumhlobo ombi. Xa uphupha amaapulo abhakabhile okanye i-pie yazo - udidekile, ukuba ulindele kakhulu into ethile.
Kutheni iiapulo ziphupha-incwadi yephupha lomfazi
Le ncwadi yephupha ithi i-apula ibonakalisa ubulumko. Iziqhamo ezinkulu zixhomekeke emthini, ibhinqa lixela ukuba ngokukhawuleza ukusebenza kwakhe kunye nemigudu iya kuvela ngempumelelo. Ukukhohlisa kwisiqhamo somhlaba, ngokuchasene, amaphupha okubi - kuba neentlonelo kubantu abakujikelezileyo, kungekhona bonke bakufisa. Ukutya amaapulo ephupheni kuthetha intlanganiso yokuqala nomntu omnandi, kwaye unike umntu ukuba adle iziqhamo - ukutshintsha kwintsapho yokuthanda. Ukuba ubona ukuthenga kwisitolo sezityalo ezibolile, iziqhamo, ngokukodwa ngentengo ephezulu, ikhuthaza ukusilela. Itokikiki icebisa - qaphela, ungayibhalisi amaxwebhu abalulekileyo kwixesha elizayo, musa ukungena kwiintengiselwano. Ukuba uphupha ukuba ugalela i-apple ebomvu etafileni, ngokukhawuleza uza kufuneka ufunde imfihlo enkulu yomntu. Yaye ukuba iziqhamo uba, ngoko kunjalo, mhlawumbi, ukusilela kulindeleke, kwaye iinjongo azikwazi ukufezekiswa.
Incwadi yephupha e-Erotic
Le ncwadi yephupha iphatha i-apula njengesiqhamo esinqatshelwe kwaye idibanisa ngentshiseko, imeko engathandekiyo, iiminqweno ezifihliweyo. Indoda ebona umthi we-apula ephupheni, inomdla kunye nokukhuselwa kwabasetyhini, iyavuya kuba yinto yokukhanga kwabo. Ukuba uhleli phantsi kwaye ahlale phantsi komthi we-apula - uphupha lokuxhamla nomfazi oselula. Xa umntu ephupha ukuba intombazana imnika isiqhamo-mhlawumbi, ebomini bobubomi, ufuna ngokukhohlisa. Kwaye ngokuphambene - ukuba umfazi ephupheni ubelana nge-apula kunye nendoda, ngoko ufuna ukumcekisa. Kwaye, ngokwebhuku lephupha, ukuba ibhinqa okanye intombazana ephupheni ithatha i-apula kwaye ifumanisa ukuba ibuhlungu - ngelishwa, kuya kufuneka idideke kwiqabane lesini. Ukuba iqabane lingasigxina, kunokufuneka ukuba wenze utshintsho kubomi besondo, uthetha ngomntu ongawuthandi - oku kubonakaliswa ngobulumko ebomini kunye. Iipulale ezibomvu ze-Ruddy ezisemashelweni esitolo okanye ezithengwa ngawe ephupheni zingathetha ukuqala ngokukhawuleza kobudlelwane apho iinjongo eziphambili zibhedlele. Kananjalo, abaninzi banqina ukuba iiapulo ezibomvu ezibomvu ziphupha ngentombazana ekhulelwe, kodwa engayazi ngako.
Ukutolika kwamaphupha ngama-mushroom
Ungayichaza njani iphupha malunga nokuncelisa kunye nobisi lwebele?
Ukuphakamisa ngamatye: ukutolika kwincwadi ephuphayo yokuphupha
Ngaba kuya kuba neenguqu ebomini ukuba iinwele ziphupha?
Yintoni enokuyilwa ngamehlo?
Indlela yamanje yokuchazwa kwephupha
Icookies zeKhokhi zeWebhu
Imibala ephezulu ye-4 eyimfashini yeminwe i-lipstick ebusika 2017
Kuphi ukufumana amavithamini ebusika?
Yintoni izazinzulu zifihla kuthi kwaye kutheni zenza oko?
Sikhokelela umntwana kwi-kindergarten
Indlela yokulungiselela umzimba wakho ukuba ukhulelwe
Shish kebab eMpuma
Yikuphi ukucutshulwa kwezinto ezenza ngcono ekhaya
Ukuzala amawele - kuthetha ukuthini oku?
I-millet porridge kwi-broth
UNicole Scherzinger: I-Biography
I-Risotto kunye neerato kunye ne-asparagus
I-Lapaho-tea yi-cocktail yamaminerali abaluleke kakhulu kunye nezinto ezilandelelanayo
Iingcinga, ukudala ulonwabo lwabesetyhini
Amathoyizi abantwana kubantwana aba-0 ukuya ku-1 ubudala
Iingcebiso zokuNyaka ezintsha zeNtsha zika-2015 ngefoto
Iyintoni ukusetyenziswa kweebhere?
I-Sauce yePilato yePazza